Lahatsoratra momba an'i Palestina
Fandehanana tsy misy Visa any amin'ny fanjakan'i Palestina
Aprily 27, 2020 Karuna Chandna Palestina, Travel, visa ho
Malaza be i Palestine satria mahasarika mpizahatany. Toy ny isan-taona dia maro ny mpitsidika tonga eto mba hahita toerana mahafinaritra eto amin'ny firenena. Ny Ranomasina Maty no teboka voajanahary ambany indrindra amin'ny tany. Any Palestine ihany no misy azy. Ka raha ianao
Aprily 27, 2020 Maitri Jha asa, Palestina
Manatsara miaraka amin'ny hazo oliva, torapasika tsara tarehy, ary amin'ny toerana misy vato 650, azo antoka fa mahasarika mpizaha tany ny Palestiniana. Na eo aza ny fifandraisana henjana rehetra amin'i Israely. Geografika Palestine dia any amin'ny faritra andrefan'ny Azia. Tsy izany ihany
Fotoana tsara indrindra hitsidihana sy handinika an'i Palestine
Febroary 13, 2020 Antika Kumari Palestina, Travel
Fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Palestina Ny fotoana tsara indrindra hitrandrahana sy hitsidika dia manomboka ny volana martsa ka hatramin'ny Mey ary manomboka ny volana septambra ka hatramin'ny Novambra. Rehefa mafana ny andro, mirehitra ary matetika ny maina. Ny volana fahavaratra amin'ny volana Jona ka hatramin'ny Aogositra dia malaza amin'ny fomba feno
Febroary 13, 2020 Shubham Sharma fahasalamana, Palestina, Travel
Ny fitsaboana i Palestine dia misy hopitaly tsy miankina na tsy miankina. Eto ambany no ahitanao ny lisitry ny hopitaly tsara indrindra any Palestine. Ny lisitry ny hopitaly dia omena an'ireo faritra telo ireo indrindra: East East Jerusalem, West Bank, ary Gaza Strip. urrently,
Febroary 13, 2020 Maitri Jha trano fandraisam-bahiny, Palestina, Travel